Nepal Dayari | काजल जोशी र छत्र शाहिको अहिले सम्मकै उत्कृष्ट टिकटक भिडियोहरु भाईरल, तुरुन्तै हेर्नुहोस् !
काजल जोशी र छत्र शाहिको अहिले सम्मकै उत्कृष्ट टिकटक भिडियोहरु भाईरल, तुरुन्तै हेर्नुहोस् !
जेठ २२, २०७८ शनिबार ७०० पटक हेरिएको
पछिल्लो समय चर्चित जोडीको रूपमा परिचीत काजल जोशी र छत्र शाही का टिकटक भिडियो हरु यति बेला भाइरल बनिरहेका छन ।
काजल जोशी र छत्रको जोडी लाई दर्सक ले धेरै मन पराइरहेका छन तर छत्र र काजोल एक अर्काको प्रेमी को रूपमा देखिए पनि उनिहरुको बिहे भने भैसकेको छैन ।
छत्र साही लामो समय देखि इन्द्रेणी संग जोडिएका छन उनी नाच्न गाउन दुबैमा खप्पिस देखिन्छन् । अर्को तर्फ काजोल भने छत्र शाहीले परिचीत गराए पछि एका एक चर्चामा आएकी हुन, उनले छत्र संग चर्चित कार्यक्रम इन्द्रेणीमा दोहोरी गाए पछि उनको चर्चा चुलिएको हो । खयर जे होस उनिहरुको जोडीमा कसैको नजर नलागोस उनिहरुको प्रेम सफल होस आगामी दिनमा नि राम्रो दोहोरी देख्न पाइयोस ।
अर्को तर्फ अहिले लकडाउन चलिरहेको छ तेसैले सबै मानिसहरु टिकटक मा ब्यस्त छन । अहिले को समयमा लगभग प्रत्येक नेपाली को टिकटक एकाउन्ट छ । टिकटक आफ्नो कला देखाउने लोकप्रिय माध्यम पनि बनी रहेको छ ।
छत्र शाही र काजोल जोशी पनि टिकटक मा निकै परिचीत छन उनिहरुको टिकटक भिडियो दर्सक ले धेरै रुचाउने गर्छन आउनुस उनिहरुका रमाइला टिकटक भिडियो हरु हेरेर मनोरञ्जन लिउ : कान्तिपुरपाटि बाट